Muuri News Network » XOG: MD Farmaajo & RW Kheyre oo isku raacay in xilka laga qaado Wasiiro magacyadooda la soo Ogaaday
XOG: MD Farmaajo & RW Kheyre oo isku raacay in xilka laga qaado Wasiiro magacyadooda la soo Ogaaday
Illo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa isku raacay isku shaandheyn kale oo kooban laguna sameynayo xubnaha golaha Wasiiradda iyo Agaasimayaasha Hay’addaha Madaxa banaan qaarkood, gaar ahaana Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha.
Wararka ayaa intaasi ku daraya iney jirto warqad la saxiixay oo ku aadan isku shaandheyn lagu sameeyo inuu isbedel dhici doona,sida warka u badan yahay.
Wasiiru dowlayaasha Wasaaraddaha Arrimaha gudaha, Amniga, Gaashaandhiga iyo Arrimaha dibada ayaa la sheegay in ay saameyn doonto isku shaandheynta cusub, ayna ku waayi doonaan xilalkooda habka awood qeybsiga beelaha Soomaaliyeed.
Sidaas oo kale wasiirka Caafimaadka ee dawladda ayaa xilka laga qaadi doona, waxaana lagu bedeli doonaa Sarkaal ka shaqeeya Xaafiiska Raysalwasaaraha dawladda Faderaalka.
Dadka la bedelayo qaarkood ayaa saameyn ku leh arrimaha Siyaasaded ee dalka, waxayna iska soo horjeedaan Siyaasadda Raysalwasaaraha, taas oo ka dhigan in ay tahay qadiyada aan sax aheyn.
Latashiyadii ugu dambeeyey ayaa cadeynaya in ay jiraan shaqsiyaad cusub oo lagu soo darayo golaha Xukuumada, kuwaas oo ay isla garowsadeen Madaxweynaha & Wasiirkiisa koowaad, gaar ahaana qorshaha la xariira arrimaha golaha.
Hogaanka Laanta Socdaalka & Jinsiyadaha ee dawladda Faderaalka oo ka soo jeeda beesha Habargidir ayaa lafilayaa in xilkan laga qaado, iyadoo lagu bedeli doono shaqsi kale oo ka soo jeeda beesha Madaxweyne Farmaajo.